Cabsi galin bambo oo ka dhacday Stockholm | Somaliska
Cabsi galin bambaano ayaa ka dhacday goobta tareenka laga raaco ee Kungträdgården oo ku taal bartamaha Stockholm ayadoo isteeshinka la xiray dhowr saacadood ka dib markii shay loo ekeysiiyay bambo la soo dhigay goobta. Qubaro ku taqasustay furfurida bambaanooyinka ayaa loo wacay ayagoo markii dambe sheegay in uusan ahayn bambo balse ay ahayd ila qosol. Sheyga meesha la soo dhigay ayaa ahaa kartoon caanaha lagu shubto oo fiilooyin lagu soo xiray. "Kani waa kaftan qaab daran oo loogu tala galay in dadka lagu cabsi galiyo" ayuu yiri mid ka mid ah qubaradii goobta timid. Labo isbuuc ka hor ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay magaalada Stockholm ayadoo uu halkaas ku dhintay ninkii isqarxiyay, dadka ayaa hada foojignaan muujinaya ayadoo dowlada ay aaminsantahay in aysan jirin qaraxyo kale oo lala damacsanyahay Sweden. Ninkii isqarxiyay ayaa la sheegay in uu keligiis ahaa oo aysan jirin cid la shaqeyneysay.
Cabsi galin bambaano ayaa ka dhacday goobta tareenka laga raaco ee Kungträdgården oo ku taal bartamaha Stockholm ayadoo isteeshinka la xiray dhowr saacadood ka dib markii shay loo ekeysiiyay bambo la soo dhigay goobta.
Qubaro ku taqasustay furfurida bambaanooyinka ayaa loo wacay ayagoo markii dambe sheegay in uusan ahayn bambo balse ay ahayd ila qosol. Sheyga meesha la soo dhigay ayaa ahaa kartoon caanaha lagu shubto oo fiilooyin lagu soo xiray.
“Kani waa kaftan qaab daran oo loogu tala galay in dadka lagu cabsi galiyo” ayuu yiri mid ka mid ah qubaradii goobta timid.
Labo isbuuc ka hor ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay magaalada Stockholm ayadoo uu halkaas ku dhintay ninkii isqarxiyay, dadka ayaa hada foojignaan muujinaya ayadoo dowlada ay aaminsantahay in aysan jirin qaraxyo kale oo lala damacsanyahay Sweden.
Ninkii isqarxiyay ayaa la sheegay in uu keligiis ahaa oo aysan jirin cid la shaqeyneysay.
Sweden oo aqoonsanaysa wadanka Falastiin
Safarkaygii Islaamka: Talooyin ku saabsan sida diinta lagu gaarsiin karo dadka aan la noolnahay